हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उपलब्धि— १ - Karobar National Economic Daily
हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उपलब्धि— १
query_builderSeptember 21, 2017 9:04 AM supervisor_account डा. रामशरण महत visibility1161
मिडियाको विकासमा फड्को
वि.सं. २०४८ अघिसम्म पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूबारे थाहा पाउन र समाचारहरूको अपडेट लिनका लागि नयाँसडकमा रहेको सन्देशगृह पुगेर विदेशी पत्रपत्रिकाहरू किन्ने चलन थियो । अहिले हातहातमै समाचार पढ्ने, सुन्ने र सबैलाई देखाउने उपकरण पुगेको छ ।
ठूलो लगानीमा निजी क्षेत्रमा दर्जनौं ब्रोडसिट दैनिक पत्रपत्रिकाहरू खुलेका छन् । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा सयौं रेडियो तथा दर्जनौं टेलिभिजन खुलेका छन् । पछिल्लो समय त निजी क्षेत्रमा अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको बाढी नै आएको छ । यी समाचार पोर्टलहरूले संसारभरका नेपालीभाषी र कतिपय अंग्रेजीभाषी पाठकहरूलाई समेत नेपालमा भएका घटनाबारे प्रत्यक्ष रूपमा ताजा अपडेट गराइरहेका छन् ।
प्रतिस्पर्धाका कारण समाचार प्रस्तुतिमा व्यावसायिकताको विकास हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सञ्चारमाध्यममा काम गरेर पनि जीवन चलाउन सक्ने विश्वास मात्र बढेको छैन, कैयौंले गाडी चढेर कार्यालय जाने–आउने हैसियतसमेत बनाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरू प्रतिस्पर्धाको विशाल मैदानमा नयाँ–नयाँ शैली, ढाँचा र ढर्रामा आफूलाई उतारिरहेका छन् । वि.सं. २०४८ पछि सञ्चारमाध्यममा यस्तो विकास भयो कि विदेशी पत्रपत्रिकाहरूको ठूलो नेपाली बजार अहिले करिब–करिब विस्थापित नै भयो भन्दा पनि हुन्छ । अझ अर्को महŒवपूर्ण पाटो के छ भने नेपाली जनतालाई चेतनशील र जागरूक बनाउने काममा यी सञ्चारमाध्यमले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रको यो ठूलो फड्कोमा दुईवटा नीतिगत सुधारको हस्तक्षेप जिम्मेवार छ । जस पक्कै पनि जान्छ तत्कालीन सरकारलाई, जसले लगानीमैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन ग¥यो । अर्थतन्त्र विस्तारका कारण विज्ञापनमार्फत भरपर्दो आम्दानीको स्रोत पनि जुट्यो । बहुलवादी अवधारणामा नयाँ सञ्चार नीति र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा सञ्चारमाध्यमको यो स्तरको विकास गर्ने सोचका साथ अनुकूल परिवर्तनहरू ग¥यो ।
टेलिकम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने नीति लिइयो, जसले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार र प्लेटफर्म मात्र दिएन, अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान दिन समर्थ बनाएको छ । एउटा टेलिफोन लाइन लिनका लागि पनि मन्त्रीलाई भनसुन गर्नुपर्ने युगको अन्त्य भई अधिकांश नेपालीको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ ।
उड्डयनमा निजी क्षेत्र र सहज पहुच
तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम विमान कम्पनी मात्र हुँदा यात्रुले एउटा टिकट लिन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले निजी क्षेत्रमा थुप्रै विमान कम्पनी खुलेका छन् । विदेशी विमान कम्पनीहरूले समेत सेवा दिइरहेका छन् । चाहेको अवस्थामा तुरुन्तै टिकट पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको यात्रा अहिले निकै सुगम बन्न पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको छलाङ
एकाधबाहेक केही सरकारी बैंकहरू मात्र सञ्चालनमा थिए । बैंकबाट कर्जा पाउनु निकै मुस्किल थियो । मन्त्रीलाई भनसुन नगरी कर्जा पाउने स्थिति थिएन । आज करिब २ सयजति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कार्यरत छन् र तिनीहरूबाट २२ खर्बभन्दा बढी निक्षेप परिचालन भइरहेको छ ।
कुल बैंकिङ कारोबारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सरकारी बैंकले ओगट्ने स्थितिमा परिवर्तन आएर अहिले यो हिस्सा निजी क्षेत्रका बैंकहरूले लिन थालिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिनका लागि सर्वसाधारणको समेत पहुँच बढेको छ ।
सेवा लिन बैंकमा जाने होइन कि बैंकहरू सेवा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । राजस्वमा खासै योगदान नभएका टेलिकम र बैंकिङ क्षेत्रबाट अहिले खर्बौको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन थालेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा विस्तार
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ । स्वदेशभित्रै बर्सेनि सयौंको संख्यामा डाक्टर, इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खुलेका छन् । अहिले करिब नौवटा विश्वविद्यालयले सेवा दिइरहेका छन् । सबै किसिमका गरी विद्यालयको संख्या करिब २४ हजार रहेकोमा अहिले बढेर ५८ हजार नाघेको छ ।
सरकारी, निजी तथा सामुदायिक लगानीमा ठूला–ठूला अस्पतालहरू स्थापना भई अस्पताल शय्या झन्डै ५ हजार पुगेका छन् । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या साढे ४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरूको संख्या पनि १ सय २३ पुगेको छ । झन्डै वार्षिक २ हजारको संख्यामा इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् ।
अहिले करिब २० वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् र ती संस्थाहरूबाट झन्डै २५ सयभन्दा बढी डाक्टर वार्षिक रूपमा उत्पादन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य उपचार नपाएर कतिको अकालमै मृत्यु हुन्थ्यो भने रोगको निदान नभएर कतिले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो ।
राहदानीमा सहजीकरण र रेमिट्यान्स आप्रवाह
धेरैले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेश पलायन भएको प्रसंग उठाउने गरेको पनि सुनिन्छ । पहिला विदेश जानका लागि नेपालीहरूले राहदानी नै पाउँदैनथे । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालीलाई राहदानी सहज बनाइएपछि विदेश जाने क्रम बढेको छ ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै वैदेशिक रोजगारीलाई महŒव दिइयो । विदेशमा काम गर्न पठाउनुपर्छ भन्ने नीति लिइयो । वि.सं. २०५४ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै राहदानी पाउन सक्ने व्यवस्था र विभिन्न मुलुकसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्झौता हुन थाले ।
राष्ट्रिय श्रम नीति– २०५६, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ आएपछि विदेशमा जाने कामदारको सुरक्षा, सम्झौता, बिमा व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक, कल्याणकारी कोष, श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएपछि विदेश जाने र कमाएर नेपाल पठाउनेहरूलाई अझ प्रोत्साहन मिलेको छ ।
देशभित्र माओवादी हिंसा बढेको अवस्थामा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित भएपछि युवाहरूलाई विदेश पठाउन राहदानी वितरणलाई सजिलो बनाइएको थियो । उनीहरूले पठाउने यो कमाइ जीडीपीको झन्डै ३० प्रतिशत छ र नेपाली अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो परेका बखत ठूलो भरथेगको स्रोत बन्न पुगेको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा विस्तार र सरकारी ढुकुटीमा वृद्धि
उदार आर्थिक नीतिले आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार हुन गएको हो । वि.सं. २०४८ मा वार्षिक राजस्व असुली रु. १२ अर्ब थियो । विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता झन्डै ३६ प्रतिशत थियो । अहिले सरकारको वार्षिक राजस्व झन्डै ७ सय ३० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ भने वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता ३४ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।
२५ वर्षअघिसम्म पनि ७ हजार किमि सडक बनेकोमा अहिले स्थानीय र सामुदायिकसमेत गरी झन्डै ७० हजार किमि सडक बनिसकेको छ भने अधिकांश जिल्लालाई सडकले छोइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई बढावा दिएर आर्थिक गतिविधि बढाइएको र कर प्रशासनमा गरिएको सुधारको नतिजा हो यो । आर्थिक गतिविधि बढ्दा निजी क्षेत्रको विकास भयो, सरकारलाई राजस्व पनि बढी आयो ।
यसैकारण गाउँगाउँमा सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका विकासका कामहरू लैजान सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाजस्ता ठूला आयोजनाहरू आफ्नै खर्चमा अगाडि बढाउन सम्भव भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइएपछि राज्य कमजोर होइन, मजबुत भएको प्रमाण हो यो ।
सेवा विस्तारस“गै गरिबी न्यूनीकरण
अहिले नेपालीको आम्दानी बढेको छ, चेतनाको स्तर बढेको छ, स्वास्थ्य सुविधाहरू बढेका छन् । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ४० प्रतिशतबाट बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको छ । यी सम्पूर्ण सुविधाको विस्तारसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या वि.सं. २०४८ मा झन्डै ५० प्रतिशत रहेकोमा अहिले करिब २१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा बढोत्तरी भएर २ सय ४० अमेरिकी डलरबाट अहिले ७ सय ६६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । वि.सं. २०४८ मा ३९.६ प्रतिशत रहेको नेपाली जनताको साक्षरता प्रतिशत बढेर अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली जनताको औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ । त्यस्तै, बाल तथा मातृ मृत्युदर पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ ।
स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच विस्तार ४० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुगेको छ । यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन, २०१० ले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा चमत्कारिक रूपमा प्रगति गर्ने विश्वका तीन मुलुकमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ । क्रमशः......
(पूर्वअर्थमन्त्रीसंग कुराकानीमा आधारित।)
बैंक राजनीतिक अस्थिरता शिक्षा र स्वास्थ्य